Storage Robots Manufacturers & Suppliers - China Storage Robots Factory
1. Mpitondra fiara, miasa miaraka amin'ny radio shuttle, dia rafitra fitahirizana mandeha ho azy sy avo lenta,dia misy ny shuttle mover, radio shuttle, racking, shuttle mover lifter, pallet convey system, WCS, WMS sy ny sisa.
2. Mpitondra fiaraRAFITRAis ampiasaina betsaka amin'ny sehatra samihafaindostria, toy ny akanjo, sakafo ary zava-pisotroe, fiara, rojo mangatsiaka, paraky, jiro sy ny sisa.
1. Four-way Multi Shuttle dia fitaovana fitantanana manan-tsaina, ampiasaina amin'ny fitahirizana koba na baoritra.Izy io dia rafitra mahomby izay ahafahan'ny asa fanasokajiana sy fanangonana haingana sy marina, mitsitsy toerana ary amin'ny flexibility.
2. Ampahafantaro ny rafi-pitaterana an-dalana efatra dia misy racking Multi-tier, Four-way Multi Shuttle, Front Cache Conveyor, Lifter, Picking Station ary Software System.Ny conveyor anoloana ambaratonga tsirairay dia miara-miasa amin'ny shuttle amin'ny ambaratonga mitovy.Ny racking ambaratonga tsirairay dia azo ampiarahina amin'ny shuttle, na ambaratonga maromaro mizara shuttle.The multi-functional composite lifter amin'ny faran'ny lalantsara, afaka manova ny haavon'ny shuttle, manolotra ny entana ho any amin'ny conveyor anoloana..
3.Ny rafitra fitahirizana mandeha ho azy Multi Shuttle efatra dia mety indrindra amin'ny indostrian'ny E-varotra sy ny indostrian'ny fiara.
1. Radio Shuttle Rack System dia iraysemi-mandeha ho azyvahaolana fitahirizana ho an'ny trano fanatobiana entana indostrialy, mampiasa shuttle fa tsy forklift hitahiry entana ao anatinyof racks.2.Araka nyfampielezam-peositrana ihany ny shuttlesny palletamin'ny faran'ny rack, izy iomety amin'nysokajy kely sy entana be dia be, toy ny sakafo, paraky, vata fampangatsiahana, zava-pisotro, fivarotam-panafodysy sns. Amin'ny ankapobeny,lalana irayisHO AN'NYihanysokajy irayofENTANA
1. Fanaterana marobesystem dia ahitana racking multi-tier, shuttle, conveyor eo anoloan'ny racking, lifter, pick-up station sy ny rindrambaiko.Ny ambaratonga tsirairay amin'ny conveyor dia miara-miasa amin'ny shuttle ary ny shuttle iray dia azo omena amin'ny ambaratonga iray na maromaro.Ny ascenseur amin'ny faran'ny lalantsara dia mandefa ny entana mankany amin'ny conveyor.
2.Multi Shuttle, toy nyfitaovana fitahirizana mahomby ho an'ny daba sy baoritrafitahirizana,no safidy tsara indrindra amin'ny fanangonana kaomandy sy famenoana entana kely, ihany koaafakaampiasaina amin'ny fitahirizana vonjimaika hanohanana ny zotra famokarana.izanymamelahaingana sy marina karazana sy pick, mitsitsy toerana sy amin'ny flexibility.
3. Aterina any amin'nymakapeoamin'ny alalan'ny fitaovana fampitanaby fanasokajiana haingana sy marina, mba hiantohana ny fahombiazan'ny asa ambony.Multi Shuttlesystemis mety indrindra ho an'ny indostrian'ny E-varotra sy ny indostrian'ny fiara.
1. Fomba efatrafampielezam-peo shuttle dia fitaovana manan-tsaina izayis ampiharina amin'ny fikarakarana pallet.
2. Ny rafitra fitehirizana racking compact amin'ny fomba shuttle dia mety hampitombo ny fampiasana ny habaka hitehirizana amin'ny hakitroky avo, hampihenana ny vidiny ary hanatsara ny fahafaha-manao.
3.Rafitra fiara fitaterana efatra, toy nykarazanafenovahaolana fitahirizana mandeha ho azy, mahatsapahetsika batch tsy misy olonaofpalletizedENTANAao anatin'ny 24 ora, mifanentana amin'ny fitehirizana mikoriana ambany sy avo lenta ary koa fitehirizana avo lenta sy avo lenta.izanydia ampiasaina betsaka amin'ny indostria samihafa, toy ny akanjo, sakafo ary zava-pisotro, fiara, rojo mangatsiaka, paraky, jiro sy ny sisa.
Drive amin'ny Racking, Asrs Storage, Carton Live, Conveyor, Shuttle amin'ny lalana efatra, Baby Shuttle,